ललित स्मृति यु–१८ फुटबल शुरु, साविक विजेता आर्मीको शानदार शुरुवात – Khel Dainik
ललित स्मृति यु–१८ फुटबल शुरु, साविक विजेता आर्मीको शानदार शुरुवात
काठमाडौं (खेलदैनिक) । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा मंगलबारदेखि शुरु ललित स्मृति यु–१८ फुटबल प्रतियोगितामा साविक विजेता आर्मीले शानदार शुरुवात गरेको छ ।
एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको समूह ए तर्फको दोस्रो खेलमा आर्मीले सरस्वती युथ क्लबलाई ४–० ले हरायो । आर्मीको जितमा कप्तान दिनेश हेन्जनले दुई गोल गरे भने सेसेहाङ आङदेम्बे र विवेक चौधरीले एक–एक गोल गरे ।
Nepal Army U18 Beats Saraswoti U18 4-0.
Check out more pics from ANFA Complex: https://t.co/LuKeUX3UZC https://t.co/LuKeUX3UZC
त्यस्तै मंगलबार नै सम्पन्न समूह ए तर्फको पहिलो उद्घाटन खेलमा न्युरोड टिम (एनआरटी) ले मच्छिन्द्र क्लबलाई ३–१ ले हरायो । एनआरटीको जितमा साहिल केसी, बिशाल क्षेत्री र निर्मल घिसिङले एक–एक गोल गरे । उता पराजित मच्छिन्द्रका लागि एक मात्र गोल सरद राईले गरे ।
स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठको स्मृतिमा शुरु प्रतियोगितामा कुल १८ टोलीहरुको सहभागिता रहेको छ । सहभागी टोलीहरुलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहको शिर्ष दुई टोली क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् ।
लिग कम नकआउटका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ३ लाख प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले १ लाख ५० हजार हात पार्नेछ । साथै प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरु छनौट गरी एएफसी यु–१९ च्याम्पियनसिप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय यु–१८ टोली तयार गारिनेछ ।
← शानदार जितका साथ वडा नं. ३ क्वाटरफाइनलमा रोमाञ्चक जितका साथ थ्रीस्टार सेमिफाइनलमा →
रिब्सको विजयी सुरुआत जेष्ठ २९, २०७५